तोरी, सूर्यमुखी तथा ओलिभको तेलका फाइदा र बेफाइदाहरु के हुन? « LiveMandu
तोरी, सूर्यमुखी तथा ओलिभको तेलका फाइदा र बेफाइदाहरु के हुन?
२४ पुष २०७७, शुक्रबार २०:१९
कुनै पनि खानेतेल किन्नु भन्दा अगाडि यसमा ३ वटा कुराहरुको मात्रा हेर्नुपर्छ । पहिलोः सैचुरेटेड फ्याट, दोस्रोः पोली अनसैचुरेटेड फ्याट र मोनो अनसैचुरेटेड फ्याट । सैचुरेटेड फ्याट ले स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउछ, त्यसैले यसको मात्रा जति कम भए राम्रो हुन्छ । मोनो अनसैचुरेटेड फ्याट ले शरीरलाई फाइदा गर्दछ, त्यसैले यसको मात्रा बढी हुनु राम्रो मानिन्छ । पोली अनसैचुरेटेड फ्याट को मात्रा बढी हुनु पनि राम्रो हो । मोनो अनसैचुरेटेड फ्याट लाई पोली अनसैचुरेटेड भन्दा राम्रो मानिन्छ । सैचुरेटेड र ट्रान्स फ्याट स्वास्थ्यकोलागि हानिकारक हुने भएकोले यसको मात्रा जति कम भए राम्रो हुन्छ ।
यो तेल ओलिभको दानाबाट उत्पादन गरिन्छ । यो तेल धेरै महँगो हुन्छ । सुर्यमुखीको तेल भन्दा लगभग ३-४ गुणा महँगो हुन्छ । यो तेलको प्रयोग खाना, सौन्दर्य, औषधि, साबुन उत्पादन, शरीरको मसाज आदिमा गरिन्छ । यो तेल संसारभरीमै प्रयोग गरिन्छ । यो तेल मुख्यतयाः Oleic acid, palmitic acid, fatty acid मिसावटबाट बनेको हुन्छ ।
विदेशमा गरिएको अध्ययनमा यो तेललाई नराम्रो बताइएको छ । तर यसमा पाईने पोषणतत्वहरु ओलिभको तेलसँग मिल्दोजुल्दो भएको पाइन्छ । हाम्रो संस्कृतिमा तोरीको तेलको प्रयोग हजारौं वर्षदेखि भइ आएको छ र मुटुरोग पनि हाम्रो पूर्वजमा अत्यन्तै कम भएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तोरीको तेललाई व्यापारको हिसाबले तल्लो श्रेणीको देखाइएको मात्रै हुनसक्छ । हाम्रो देशमा सजिलैसँग र सस्तोमा पाइने तोरीको तेल, जुन स्वास्थ्यको लागि फाइदाकारी भएपनि अन्य विदेशी तेलहरुको प्रयोग हुनु स्वास्थ्यलाई मात्रै होइन देशको अर्थिक अवस्थालाई समेत असर गरेको छ ।
सूर्यमुखीको तेल (Sunflower Oil)
#ओलिभको तेल (Olive Oil)
#तोरीको तेल (Mustard Oil)